मोदीलाई भेटेका प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किदै ! - मोदीलाई भेटेका प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किदै !
मोदीलाई भेटेका प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किदै !
२०७५, २४ भदौ, 04:01:23 AM
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर आइतबार स्वदेश फर्किँदै छन ।
भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस आईका नेता डाक्टर मनमोहन सिंह लगायतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेका प्रचण्ड आइतबार दिउँसो काठमाडौं आइपुग्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
भारतमा प्रचण्डले मोदीसँगको भेटवार्ताका क्रममा मधेस केन्द्रित दल, संविधान संशोधन र आगामी डिस्कोर्सका बारेमा छलफल गरेका थिए । नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार र आफ्ना अनुकुलताका विषयमा छलफल गर्न मोदीले प्रचण्डलाई दिल्लीमा बोलाएको पनि कतिपयको तर्क थियो ।
दिल्लीबाट फर्केलगत्तै प्रचण्ड चीन जानेछन । भदौ ३० गते देखि शुरु प्रचण्डको चीन भ्रमणमा दुई देशबीचको आपसी हितका विषयमा छलफल हुनेछ ।